दिल्लीमा कोठी चलाउने नुवाकोटकी चमेली पक्राउ - Pardafas
दिल्लीमा कोठी चलाउने नुवाकोटकी चमेली पक्राउ
फाल्गुण २९, २०७७
मानव बेचबिखन अपराधमा संलग्न रही फरार एक महिलालाई प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको छ । नुवाकोटको दुप्चेश्वर नगरपालिका–२ घर भएकी चमेली र सीता भन्ने ६२ वर्षीया रुकमाया तामाङलाई २३ फागुनमा पक्राउ गरिएको हो ।
तामाङले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित जि.बी. रोड ५६ नं.गल्लीमा कोठी चलाउँदै आएको ब्युरोले जनाएको छ । ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटको सहयोगमा विदुर नगरपालिकाबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ७ दिनको म्याद लिई उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ ।
आफूलाई जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाएको भन्दै एक महिलाले तामाङविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेकी थिइन् । उनका अनुसार तामाङको सहयोगीले चितवनमा चिनजानको मानिसको घरमा काम लगाइदिन्छु भनी नयाँदिल्लीस्थित तामाङको कोठीमा लगेर बेचेका थिए ।
आफूलाई बेहोस हुने औषधि मिसिएको पानी खुवाई काठमाडौंबाट दिल्ली पु¥याइएको जाहेरीकर्ताको भनाइ छ । त्यसपछि तामाङले बन्धक बनाई राखी वेश्यावृत्तिमा लगाएको उजुरीमा उल्लेख छ । उक्त घटनामा संलग्न अन्य प्रतिवादीहरुको पनि खोजी भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ ।
सुर्खेतमा मदिरा सेवन गरेर वरिष्ठ सईद्वारा निर्वाचन अधिकृत र स्थानीयलाई कुटपिट
नेपाली कांग्रेसको प्रवक्तामा डा. प्रकाशशरण महत नियुक्त
सानिमा बैंकको सीईओमा निश्चलराज पाण्डे नियुक्त
सूर्यविनायकको वर्कसपमा भेटियो चोरीका बाइक, ३ जना पक्राउ